အော်ဂဲနစ်မြေသြဇာ - Opps Group မှလီမိတက် Co. , Ltd
အတောင့် Mills ကထိုအခြားစက်များ
သုံး Pass ကိုခြောက်စက်
• ကုန်ကြမ်း: နို့ထွက်လယ်ယာ, အော်ဂဲနစ်ကနေဆွေး (EFB အချိန်ကြာမြင့်စွာဖြုန်းတီး) + NPK ဓာတု, စသည်တို့
• စို: 20% natually အခြောက်
• အဆင့် 1: ခါးပတ်ခြောက်စက်
• အဆင့် 2: အော်ဂဲနစ်အဘို့အရောနှော (EFB အချိန်ကြာမြင့်စွာဖြုန်းတီး) + NPK ဓာတု သာ
• အဆင့် 2: အတောင့်နှင့်ဘူတာအေး: အရွယ်အစား 8 မီလီမီတာ / 10 မီလီမီတာအချင်းနဲ့ 20-40mm ချိန်ညှိအရှည်လုံးလေးများထဲသို့ဆွေးသို့မဟုတ်အော်ဂဲနစ်လုပ်ငန်းစဉ်။
Kush.com ၏ပြတိုက်မှူးကသင့်ထံသို့ယူဆောင်မရေိကစိုက်ပျိုးရေးလျှော်ဂန္ထဝင်၏နှလုံးသည်တက္ကဆက်လျှော်ကွန်ဗင်းရှင်းတိုင်းပြည်အတွက်လျှော်ခြင်းနှင့် CBD စီးပွားရေးလုပ်ငန်းကျွမ်းကျင်ပညာရှင်များ၏အကြီးဆုံးစုရုံးပါ! ထက်ပိုမို 10,00 နှင့်အတူ ...
ဆေးခြောက်ဆီတလမ်းညွှန်နိုင်ရန်အတွက် CO2 Extraction
ကာဗွန်ဒိုင်အောက်ဆိုဒ် (CO2) ထုတ်ယူလေ့အမျိုးမျိုးသောအစားအသောက်နှင့်အခြားထုတ်ကုန်စေရန်အသုံးပြုသည် - ထိုသို့ cannabidiol (CBD) တွင်ထိပ်တန်းအရည်အသွေးသည်ဆေးခြောက်, ဆီမြင့်မားသော extracting များအတွက် ပို. ပို. လူကြိုက်များဖြစ်လာပါတယ်။ တကယ်တော့, subcritical ...
Supercritical CO2 Extraction: တစ်ဦးကနယူးရပ် ...
Supercritical CO2 Extraction ဆိုတာဘာလဲ ထိုကဲ့သို့သောကော်ဖီ, လက်ဖက်ရည်, vanilla နှင့်ရေမွှေးအဖြစ် cannabis မတိုင်မီ Supercritical CO2 ထုတ်ယူခြင်းသည်အခြားစက်မှုလုပ်ငန်းအမျိုးမျိုးအတွက်ဆယ်စုနှစ်ပေါင်းများစွာန်းကျင်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ ဒါဟာ supercri အတွက်အလုပ်လုပ်တယ် ...
သစ်သားတောင့် EXP အပေါ်မြေပြင်ကိုချိုးဖျက်ဖို့ Enviva ...
Enviva လပ်ချိန် Pascagoula ရဲ့ Bayou Casotte ဆိပ်ကမ်း, မစ္စစ္စပီ၏ဆိပ်ကမ်းအသစ်အဏ္ဏဝါပို့ကုန် terminal ကိုအပေါ်မြေ။ အဆိုပါအခမ်းအနားသို့အမှတ်အဆိုပါ $ 90 သန်း terminal ကို၏ဆောက်လုပ်ရေး၏အစ။ constr ပြီးစီးအပေါ်သို့ ...
ဂျာမဏီ in: စံချိန်တင်သစ်သားတောင့်ထုတ်လုပ်မှု ...
740.000 t ကိုနှင့်အတူသစ်သားလုံးလေးများ၏ဂျာမန်ထုတ်လုပ်သူများယခင်နှစ် (608,000 t) ၏တူညီသောကာလနှင့်နှိုင်းယှဉ်ပါ 2019. ၏တတိယသုံးလပတ်အတွင်းထုတ်လုပ်မှုစံချိန်ကိုသတ်မှတ်, ကဏ္ဍ 21,7% တစ်ခုတိုးအောင်မြင်။ ထို့ကြောင့် Mor ...
မြေသြဇာ granules စက် , RDF ဆီ , ကြိတ်စက်စက် , သစ်ပင် Shredder , ပလတ်စတစ် granules , granules ,